Dowladda Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqday hay’ad dib u dejin u sameynaysa dadka ka soo laabanaya Xerooyinka Dhadhaab – Radio Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqday hay’ad dib u dejin u sameynaysa dadka ka soo laabanaya Xerooyinka Dhadhaab
Munaasabad lagu soo bandhigayey hay’ad ka shaqeyn doonta dib u dejinta iyo takulaynta Qaxootiga Soomaalida ee dib loogu soo celinaayo dalka Soomaaliya iyo barakacayaasho, oo lagu qabtay xarunta Xalane ee magalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay xubo katirsan golihi wasiiradda xukuumadii kalsoonida ka waysay Barlamaanka federalka Soomaaliya, mas’uuliyiin ka socotay laanta Qaramada Midoobay Qaxootiga iyo marti sharaf munaasabadda lagu cazuumay.
Hay’addan oo loogu magac daray hay’adda Takulaynta Qaxootiga iyo barakacayaasha ayaa hoos imanaysa Wasaarda Arrimaha gudaha Soomaaliya iyadoona doorka ugu wayn ka qadan doonta dib u dejinta dadka qaxootiga ah e ee qaybihii ugu horeyey ay dhowaan soo gareen gobolada Jubbooyinka ee Koonfurta Soomaaliya.
Agaasimaha wasaardda cafimaadka Soomaaliya Maxamed Cabdi Faraax oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii ka hadalay munaasabaddaasi ayaa sheegay in wasaarada caafimaadka Soomaaliya ay u diyaar gadowday sidii dadkaasi ay u heli lahaayeean caafimaadka tayo wanaagsan oo lamid ah kii ay ku hayseen Xerooyinka Qaxootiga Dhadhaabb ee dalka Kenya.
Sii-hayaha xilka Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud dib u dhiska Soomaaliya Marwo Nadiifo Maxmaed Cismaan ayaa shaaca ka qaaday in ay Wasaarada Howlaha Guud ay samaysay qorshe dib u dejin loogu samaynayo dadkaasi Soomaalida ah.
Dr C/raxmaan Ducaale Bayle sii-yahayaha xil Wasiirka Arrimaha dibadda iyo Dhiigi galinta maal gashiga Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay in ay farxad weyn u tahay in dadka Soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa Xero Qaxooti ay doortaan ay dib ugu soo laabtaan dalkooda Hooyo taasi oo muujinaysa sida Soomaaliya ay ugu soo kabanayso colaadihii sokeeye oo dalka ragaadiyay.
“Soomaaliya waxa kaliya oo ka maqan waa nabad nabadii hadii la helo waxkasta oo aduunka yaalo halkan Soomaaliya waa laga helayaa” ayuu yiri Dr Beyle sii-hayaha Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya.
Sidoo kale Sii-hayaha xilka Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Fedralka Soomaaliya Cabdulaahi Godax Barre oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ka badan 10 kun oo Qaxooti Soomaaliyeed ay go’aansadeen in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda Hooyo ee Soomaaliya.
“Sedax qeybood oo dadkaasi kamid ah ayaa dhowaan soo gaaray gobolada Jubbooyinka waxaana dadka intooda badan la dejin doonaa gobolada Jubbooyinka Bay iyo Gedo, waxaana la kaashanayaa dib u dejinta dadkaasi Soomaaliyeed Hay’adaha Qaramada Midoobay ,5 Milyan oo Yuuro waxaan noo balan qaaday Bangiga Aduunka” ayuu sheegay C/laahi Goodax Barre sii-hayaha Wasiirka Arrimaha gudaha.
Ku dhawaan qista hay’dan ayaa ku soo beegnaysaa iyadoo lagu wado in dalka Soomaaliya ay soo garaan 10 kun oo Qaxooti Soomaalida oo muddo 20 sano ka badan ku noolaa xerooyinka Qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.